Applicationsတွေမတင်ခင်လေးမှာဖတ်ပေးပါ။ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
25-03-2008, 09:30 AM
အခုလို မန်ဘာတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အသုံးဝင်လာတဲ့ Applications တွေကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မျှဝေခြင်းဖြင့် ကျနော်တို့ ကွန်ပြူတာ အသိပညာကို တိုးတက်စေပါတာ အမှန်ပါ။ သုံးရတဲ့လူလည်း ပေးခဲ့တဲ့လူကို အမြဲကျေးဇူးတင်နေပါမှာ အမှန်ပါပဲ။ အခုကျနော်တစ်ခုတောင်းဆိုချင်တာကတော့ တင်ပေးတဲ့လူတွေများ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်တင်တဲ့ဟာလေးရဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကို ရေးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အသုံးပြုနိုင်မယ့်လူအတွက် ပိုအဆင်ပြေစေမယ်လို့ ကျနော်ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျှဝေသူက ဒါလေးကို ထပ်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ အတိုင်းထက်လွန် ကျေးဇူးတင်မိနေမှာပါ။ လုပ်ပေးမယ်လို့လဲ ကျနော်မျှောင်လင့်မိပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 26 ဦးတို့မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုသဝေထိုး, စစ်တွေသားချေ, ဆလိုင်းသန့်ဇော်ဝင်း, ရန်လေး, မောင်သံသရာ, နှင်း, alicia5556, Aung Aung, babylay, bonge, cherry, kokomaung.ko28, komaung82, kyawminkhoung, maJunior, moe gyi, myomyatthu, phoeko, phoetharlay, sakuranbo, sayamun, star lay, thurein, tu tu, yelinoo
ပြန်စာ - Applicationsတွေမတင်ခင်လေးမှာဖတ်ပေးပါ။
ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်း တောင်းဆိုမယ်နော်. . .
ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီဆော့ဝဲလ်လေးတွေရဲ အရွယ်အစား ကိုပါဖြစ်နိုင်ရင်ဖော်ပြပေးကြပါ။ ကျွန်တော်တိုတွေ အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်နက်ရှင်က . . . ကြောင့် ဆိုက်အရွယ်အစားကို သိတော့ download ချသင့်မချသင့် စဉ်းစားလို့ရတာပေါ့ . . .
ခင်မင်လေးစားလျှက် . . .
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ yeman အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရန်လေး, မောင်သံသရာ, babylay, cherry, phoetharlay, sakuranbo, star lay, toetoelay, yelinoo
18-08-2008, 07:29 AM
Application တွေပါ ဖိုရမ်အောက်က တော့ပစ် (Thread ) တွေအရမ်းများလာပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆော့ဝဲတွေက အမြဲတမ်းဗားရှင်းအသစ်တွေထွက်နေတာဆိုတော့ တခါထွက်တိုင်းသာ တော့ပစ်တခုလိုက်ဖွင့်ရရင် သိပ်မကောင်းပါဘူး ။ အများစုကလည်း နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ တော့ပစ်တွေမှာသာ ဒေါင်းလုဒ်လေ့ရှိတော့ အရှေ့ပိုင်းတော့ပစ်တွေက လင့်တွေလည်း ယူမယ့်သူမရှိဘဲ သေကုန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆော့ဝဲ တော့ပစ်တွေကို အမျိုးတူရာ၊ ပေါင်းလိုက်ပါတယ်။ တော့ပစ်တွေများလွန်းတော့ အကုန်တော့ ပေါင်းလို့မပြီးသေးပါဘူး ။ နောက်ပိုင်းဆော့ဝဲတွေ တင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တင်မယ့်ဆော့ဝဲက အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေထဲ အကျုံးဝင်မ၀င် တချက်လောက်ကြည့်ပေးကြပါ ။
တင်မယ့်ဆော့ဝဲနဲ့ ကိုက်ညီမယ့်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသာ ပို့စ်ထပ်တင်ကြပါ ။ တော့ပစ်အသစ်မဖွင့်ကြပါနဲ့ ။ ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ မကိုက်မှသာ တော့ပစ်အသစ်ဖွင့်ကြပါ ။ ခေါင်းစဉ်တွေကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာတော့ပစ်ကို ရောက်သွားမှာပါ ။
Download manager ဆော့ဝဲတွေကို အပေါ်က လင့်မှာဘဲ တင်ပေးကြပါ။
FTP Softwares Collection
Converter များစုဝေးရာ (၁)
အပေါ်ကတော့ပစ်ကတော့ audio / video converter တွေအတွက်တော့ပစ်လေးပါ။
Converter များစုဝေးရာ - ၂
အပေါ်ကတော့ပစ်မှာတော့ Audio / video မဟုတ်တဲ့ တခြား converter တွေတင်ဖို့ပါ။
အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ တော့ပစ်တွေက တကယ်ဆို အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ဖွင့်ထားတာကြာပါပြီ ။ မတွေ့ကြမှာစိုးလို့ ပြန်ညွှန်းပေးတာပါ။ ကျန်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေမှာလည်း အမျိုးတူရာတွေ စုပြီးရင် ကျွန်တော်လင့်ထပ်ဖြည့်ပေးပါ့မယ်။
BitDefender Antivirus & Internet Security
NOD 32 latest version
Avast Anti-Virus Softwares Collection
Panda Anti virus & Internet Security
PC Tool Internet Security Suite
Solo Antivirus & Internet Security
Zone Alarm Antivirus & Internet Security
အောက်ကလင့်မှာတော့ နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ country code , ph code တွေရှာတဲ့ ဆော့ဝဲလေးတွေ တင်ထားပါတယ်။
trojan ရှင်းတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို အောက်မှာ ယူနိုင်ပါတယ်။
Trojan Remover softwares collection
အောက်ကလင့်မှာတော့ utilities ဆော့ဝဲတွေထဲမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ tune up utilities ဆော့ဝဲ တွေ တင်ထားပါတယ်။
Tune up utilities Collection
အောက်မှာတော့ registry ပြင်တာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေ တင်ပေးထားပါတယ်။
registry maintenance software collection
Rapidshare Software Collection
Web Browser Collection
PDF Reading , Editing & Converter softwares
Screen Capture Software Collections
Logo creator software collection
Screen saver software collection
Recovery Software များ
Last edited by tu tu; 26-02-2010 at 05:02 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 49 ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုသီဟ, ကိုဘွဲ, စမောလေး, ဇာနည်မောင်, တက်တူး(t@t tO_o), ဖိုးကံကောင်း, ဖယောင်း, မင်းခကို, ယဉ်ဌေး, ရန်လေး, ကျော်ထက်ချိန်, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, သောကမဲ့မိုးတိမ်, ဖြိုးယံလေး, နှင်း, နှင်းဆီနီ, @ Y0E, akmak2, alicia5556, athinmoe85, aungthuraATR84, AZM, bonge, centurymg, cherry, hninway, jucklucifar, khit100, kokhing, kokomaung.ko28, KznT, Lu Zein, maJunior, mg aung kyaw, nozarway, nyinyi mt, nyinyilat, phoeko, phoetharlay, sAnDViper, smlat88, spadeone, thulay2, tu tu, Venom, waterpeople, yelinoo
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 08:11 AM